Miski Cabdinuur Salal | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 12
Boog calooleedku waa xaaladda uu caabuq ku dhaco dahaarka difaaca caloosha. Bulshadeenna Soomaliyeed waxa ay u yaqaanaan “Gaas” , dahaarka caloosha waxa uu ka kooban yahay qanjiro kuwaas oo soo saaro asiidka(Acid) caloosha iyo insaam(enzyme) waxana loo yaqaanaa bebsiin (pepsine) .Asiidka caloosha waxa uu burburiyaa cuntada ,bebsiinka wax uu shiidaa borotiinka . Dahaarka caloosha waxa uu ka hortagaa in asiidka loogu talagalay burburinta cuntada uu gaaro nuudaayasha caloosha. Maxaa Sababa Boog Colooleed Bakteeriyo (Bacteria). Dhaawac soo gaaro dahaarka caloosha. Cabidda qamriga. Gubashada calooshada. Isticmaalka badan ee kafeega (Cofee). Xasaasiyadda kutimaada cuntooyinka qaar. Caalamadaha Lagu Garto Boog Calooleedka Matag. Lalabo. …
Boog lugeeydka macaanka waa boog furan ama dhawaac kaas oo ku dhaco qiyaas ahaan 15% bukaanada qabo cudurka macaanka, waxayna caan ku tahay inay ku dhacdo lugta qeyb teeda hoose 6% isbitaal ayey la jiiftaan boog lugeydka macaanka, taasoo ugu wacantahay infekshenka iyo dhibaatooyinka la xiriira boogtaas. Maxaa Sababa Boog Lugeeydka Macaanka? Qof kasto oo qabo cudurka macaanka wuu ku dhici karaa boog lugeeydka macaanka, bukaanada qabo cudurka macaanka oo isticmaalo cirbada macaanka insuliin ayaa ah bukaanada ugu badan oo halista ugu jiro boog lugeeydka macaanka. Dadka aadka u cayilan iyo dadka isticmaalo tubaakada waxay door wayn ka ciyaaraan …
Hadalka waa xariirka u dheexeeya aadanaha. Wuxuuna isku xiraa bulshada, wuxuun ka qayb qaataa isfahanka aadanaha, iyo isku xirka bulshada, hadana wuxuu leeyahay saamayn wayn. Hadaba Qaab Noocee Ayuu Saameyn U Yeelan Karaa? Waxuu leeyahay saameeyn wanaagsan iyo mid xun oo qalbiga raad wayn ku yeelato. Makula tahay in uu hadalka mararka qaar uu ka saameeyn badanyahay xabada iyo hubka lagu dagaalamo? Waxaa si sax ah u ogaanaysaa jawaabta su’aasha marka aad si sax ah u dhuuxdo maahmaahda oranayso “dhawaaq meel dheer dhagaxna meel dhow ayuu dhacaa”. Hadalka waa awood burburin karta ama dhisi karta nolosha aadanaha tusaalle: Qoys …